Panama inouya kuguta sezvo United States ichichinja peji kuenda kuna Gregg Berhalter era | 1xbet
MaAmerican achasangana nePanama kuGlendale kozoti Costa Rica musi wa2 Kukadzi muSan Jose mune mbiri dzehukama. Stiffer uye mimwe miedzo yakakosha yakamirira, kusanganisira Concacaf Gold Cup muna Chikumi uye hushamwari hweKurume neChile hwakaziviswa neChina. Boldon Stadium uye kutanga kwemakwikwi e2022 World Cup, kutanga kweBerhalter inguva yakamirirwa kwenguva refu; chiitiko chakakosha munzira yekudzoka mushure mekukundwa 2-1 muna Gumiguru 2017 izvo zvakaona US ichitadza kusvika kumafainari eNdebe yeNyika kekutanga kubva 1986.Tim Howard anogumisa basa rekubwinya kwemunhu asi kwete kukudzwa kwechikwata Verenga zvakawanda
Akazvarwa muNew Jersey, aimbove mudziviriri akaita 44 kuoneka kuUS.Pachikwata chekirabhu akatambira Zwolle, Sparta Rotterdam naCambuur muNetherlands, Crystal Palace kuEngland, Energie Cottbus ne1860 Munich kuGerman neLos Angeles Galaxy muMajor League Soccer, ndokuzotungamira Sweden, Hammarby, kwemwedzi gumi nematanhatu.
Yakanga iri yechina yeCrew postseason mumakore mashanu pasi peBerhalter. uye akashandisa nzira-yekushandisa-yakateya hwaro kumunhu ane chipo chekutamba, Federico Higuain, kuti ataure achinyatsogona. mutambi mumwe wekubatsira uye zvibodzwa: kusaina kutsva kweChelsea, Christian Pulisic. senguva dzose, iyo Europe-based set haina kudaidzwa mumusasa waJanuary.Kunyangwe nechirambidzo icho, Berhalter akaveza boka rinonyanya kudanwa padanho iri: roster yevarume makumi maviri nevatatu ine vatambi 11. vasina kukwana. nhamba mukuonekwa. Chokwadi, nekuonekwa zana nemakumi mana nemaviri uye zvibodzwa gumi nemanomwe, Bradley ane mamwe makepi uye nekuramwa kupfuura vamwe vese muchikwata chakabatanidzwa. Kuchave nekunyongana kwakati pakuona kutungamira kwaJeremy Ebobisse wePortland Timbers naChristian Ramirez weLos Angeles FC mari kana vakaita madhiri avo. kuratidza kuti vanogona kubatsira nguva zhinji. Kunyanya kune gore rino, musangano nePanama uchapa kukurumidza kuona kwekuti Berhalter anoronga sei kutanga timu – Columbus-esque 4-2-3-1?Zvakawanda, basa rake ndere kupa chinangwa nhungamiro – hunhu hwakaomarara kupinza musangano chero ripi zvaro pasina hutungamiriri hwakajeka uye hune chiremera. inoshamisa padanho rekirabhu, ndoda padanho repasi rese. Vashoma vatambi vechidiki vakaratidza kuvimbisa pasi paSarachan, saTim Weah naWeston McKennie. Mhedzisiro, nepo isiri iyo yekutanga, yaive yakasindimara; iyo US yakahwina mitambo mitatu ikakundwa mishanu.Dambudziko rakatarisana nemubhadharo mutsva harina kunyanyosiyana neiro rakatarisana naJurgen Klinsmann zvisati zvaitika: kodzera Mukombe wePasirose uku uchiwedzera humwe hunyengeri uye hunyengeri kuti utsigire zvemitambo nehumweya hweAmerica.
Chikamu chinokurudzira guru, chikamu chinokanganisa, Klinsmann akazogumburwa apo iye anofungidzirwa kuti muoni akatadza kuona kwaaienda.Maitikiro, mutambo wekutamba uye hunhu hwedziva rematarenda sezvo veterans vakura uye vechidiki kazhinji vakakundikana kukunda vakaratidza kudzikisira tarisiro kwaive kwakakodzera kunyangwe rondedzero yaKlinsmann yakaramba yakakwidziridzwa uye hutongi hwake hwakazara kuita chirongwa cheIconarus.
Mukupesana, Berhalter anonyanya kuita pragmatist kupfuura anofungidzira uye anotaridzika kunge ane bheji rakanaka kuti azive vatambi vakanakisa varipo uye vawane zvakanakisa kubva kwavari nenzira ine hungwaru uye yakajeka – uye kana vachiratidza kuti havana kukwana zvakakwana masimba echinyakare, kutsvaga nzira yekuti timu ikunde zvakanyanya chero zvakadaro. mumiriri uyo angangodaro akawanikwa kare kare. Izvo zvingave zvemubatanidzwa uye fanbase zvakafanana kana murairidzi mutsva asingakwanise kufungidzira kuhwina kukuru uye varaidzo inodakadza mushure mekumirira kwenguva refu kusvika kwake.Basa iro – chikamu chinoonekwa neveruzhinji, chero zvodii – chinotanga nemusi weSvondo.